राणाका जेलबाट प्रजातन्त्र सेनानी बन्दीको चिट्ठी | परिसंवाद
राणाका जेलबाट प्रजातन्त्र सेनानी बन्दीको चिट्ठी
(वरिष्ठ पत्रकार मणिराज उपाध्यायको दुर्लभ डायरी ‍‍...भाग १)
परिसंवाद् डेस्क	 बुधबार, फाल्गुन ७, २०७६ मा प्रकाशित
(दैनिक समाजका प्रधान सम्पादक वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मणिराज उपाध्याय बिक्रम संवत् २००३ सालदेखि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो । उहाँको राजनीतिक संलग्नता आफ्ना सहपाठी गोविन्दप्रसाद (जो वि.सं. १९९७ मा नै पाल्पा जेलमा पर्नुभएको थियो) र शिक्षक दमनराज लगायतका व्यक्तिहरूको सम्पर्कबाट अन्जानमै राजनीतिमा हाम फाल्नुभएको थियो । २००४ सालमा राणा विरोधी आन्दोलन तीब्र गतिमा अगाडि बढेको थियो । त्यही साल प्रजापञ्चायत भन्ने पार्टीको गठन भएपछि उहाँ सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभयो । त्यही क्रममा २००७ सालको मंसीरमा स्वयम्भूका देवतालाई १२ वर्षे सम्यक पूजाका क्रममा भूखेल लैजान रोक्नका लागि पहल गर्न उहाँलाई पार्टीले खटाएको थियो । प्रत्येक १२ वर्षमा र नयाँ राजा घोषणा हुँदा त्यहाँका देवता भूखेलमा सारेर देवता र राजाको पूजा गर्ने चलन रहेछ । राजा त्रिभुवनलाई पदच्यूत गरी नाबालक नाति ज्ञानेन्द्रलाई राणाले भर्खरै मात्रै राजा घोषणा गरेका थिए । तर आम नेपाली जनता त्रिभुवनलाई नै राजा मान्थे र ज्ञानेन्द्रलाई राजा स्वीकार्ने पक्षमा थिएनन् । त्यो सम्यक पूजामा गोडा धोएर नयाँ राजाको पूजा गराउन सके राजा ज्ञानेन्द्रले जनस्तरबाट सांस्कृतिक हिसाबले पनि मान्यता पाएको ठहरिने थियो भनेर राणाले गुभाजुहरूलाई देवता सार्न दवाव दिएको अवस्था रहेछ । उता जनमानसमा चाहिँ स्वयम्भूका देवतालाई भूखेल लैजानबाट रोक्न सके सम्यक पूजामा बाधा पुग्नुका साथै नयाँ राजाको पूजा हुने थिएन र नाबालक राजालाई जनस्तरबाट मान्यता दिलाउने राणा शाहीको आकांक्षा पनि पूरा हुन पाउने थिएन भन्ने रहेछ । त्यही क्रममा गुभाजुहरूलाई राणा विरोधी आन्देलन र उनीहरूको चालबारे बुझाएर स्वयम्भूका देवता भूखेल नलैजान मनाइवरि स्वयम्भूबाट नयाँ सडकस्थित घर फर्किने क्रममा विष्णुमति किनारमा मणिराज उपाध्यायलाई पुलिसले घेरा हालेर पक्राउ ग¥यो । एक दिन थानामा राखेर भद्रगोल जेल चलान गरियो । अत्यन्तै कडा सुरक्षाबीच उहाँले बन्दी अवस्थामै बहादुरीका साथ इन्क्लाबका नारा लगाउनुभयो । जेलमा रहँदा मणिराज उपाध्यायले आफ्नी आमालाई लेखेका चिट्ठीको सँगालो जम्मा गरी बन्दीको चिट्ठी शीर्षकमा डायरी तयार गर्नुभएको रहेछ । हातले लेखिएको पुरानो त्यो डायरी उपाध्यायका सुपुत्र, दैनिक समाजका व्यवस्थापक वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेशराज शर्मा प्याकुरेलको सौजन्यबाट परिसंवाद् डट कमलाई प्राप्त हुन पुगेको छ । यो दुर्लभ डायरी उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा हामी वरिष्ठ पत्रकार शर्माप्रति आभारी छौँ । यो डायरी आज फागुन ७, प्रजातन्त्र दिवसकै अवसर पारी हामीले क्रमशः प्रकाशन गर्दै जाने निधो गरेका छौँ । हामीलाई विश्वास छ, यो दुर्लभ डायरी हाम्रा विद्वान पाठकहरूले रुचाउनु हुने नै छ । — सं.)
श्री पुजनीय माताजीमा
मेरो दिनप्रतिदिनको कोटीकोटी दण्डवत ।
आमा, हुन ता मलाई यो विश्वास छैन कि म यो पत्र तपाईको पाऊसम्म पु¥याउन सकूँला भन्ने, ता पनि हृदय मान्दैन । निन्द्रा पनि लागेको छैन । मलाई कुर्न राखिएका कुरुवाहरू पनि घुर्न थालेका हुनाले यो पत्र लेख्न थालेको हुँ । मलाई आशिर्वाद दिनुहोस, कुनै सुरतबाट म यसलाई पाऊसम्म पु¥याउन सफल होऊँ ।
माता स्व. पद्मकुमारी प्याकुरेल
हिजो दिनको दुई बजे मलाई पक्रेर थानामा लगी थुनेको हाल र मेरो उपर सरकारले चलेको चाल ता बिहानै भेट्न आउनुभएको दाजुको हात कहेकै थिएँ । मलाई भेटेर दाजु फर्केको केही बेरपछि म साथीहरूले भात पकाइसकी खान बोलाएकाले भात खान भनेर बसेको थिएँ । यत्तिकैमा बाहिर कुनै राज कर्मचारीले चिच्याउँदै भन्यो — ‘तल तपसिलमा लेखिएका व्यक्तिहरू आफ्नो बोरा बिस्तरा सहित ११ बजेसम्ममा तैयार होऊन् ।’ अनि लेखिएका नामहरू भन्न थाल्यो । खूब ध्यानपूर्वक गाँस हाल्नै छोडी सबै ठाडाठाडा कान लगाई सन्न थाल्यौँ । बीचमा मेरो नाम पनि उच्चारण गरियो । यसमा कसैले भने— तिमीहरूलाई छोड्न लाग्यो । अनि कसैले भने— सिंहदरबार बयान लिन लग्न लाग्यो । तर आमा, मेरो मनमा भने यी दुबै कुराभन्दा अलग अर्कै कुरा थियो जुन कि वास्तविक नै रहेछ ।
भात खाइसकी लुगा लाएँ अनि गुण्टा पनि पारेँ । यत्तिकैमा (बिहानको) ११ बजिहाल्यो । हामी नाम भएकाहरूलाई फेरि बोलाउन आयो । क्रमशः हामी निस्कँदै गएम् । बाहिर थानाको ढोकैमा १ नंबरको रातो लहरी राखेको रहेछ । म त्यस नजिकै पुग्ने वित्तिकै तपाईले पठाइदिनुभएको पान ल्याएर मलाई मेरो नाम काटी कसले हो कुन्नि दियो । तर, पान पु¥याउन को आएको थियो, देख्न पाइँन, पुलिसले नै मेरो हातमा दियो । पान खोलेर पान खाएँ अनि मलाई ल उक्लिनुहोस भने । म हुन्छ भनेर एक खुट्टा पाउदानमा राख्नुसाथै मैले इन्क्लाब भनेर वीर त्रिभुवन भन्ने नारा उठाइहालेँ । त्यहाँ मोटरमा बसेका साथीहरूमध्ये धेरै ता डराएर जिन्दावाद भन्ने आवाज दिएनन् । तर, त्यस्तैमध्ये १/२ जनाले र महिला ३ जना जो थिए, उनीहरूले आफ्नो आवाजको जोडमा जिन्दावाद भन्ने उत्तरले व्योम गुन्जायमान गरिदिए । आमा, यो सुन्दा तपाईलाई साह्रै खुशी लाग्ला कि म रोएर, डराएर जेल आइनँ, हाँस्दै नारा लाउँदै राणाशाहीको विरुद्ध तिमीहरू पनि बोल भनी आफूलाई जेल ल्याउने कर्मचारीहरूलाई पनि सम्झाउँदै आएँ । लहरीले आफ्नो गति लियो । हामीहरूले पनि आफ्नो गति छोडेनौँ ।
वरिष्ठ पत्रकार स्व. मणिराज उपाध्याय
क्षणभरवाद हामीलाई भद्रगोल जेलको ढोका अगाडि ओराल्यो र यहाँ सब हामीलाई राणाका दलालहरूले छोपे । गुण्टा फेरि खोली जाँचियो र शरीर पनि यहाँसम्म कि आमा, जुत्तासम्म खोलेर जाँचे । मेरो फाउन्टेन पेन पनि बाहिरै लिइहाल्यो । भित्र ता केही लग्न दिँदो रहेनछ । अनि तीन पुस्ते लेख्यो र एक एक गरेर नाम बोलायो । मेरो नाम आयो, म गुण्टा बोकेर लाइनमा लागेँ । जब मेरो पयर जेलको ढोकामा पर्न लागेथ्यो, फेरि मैले इन्क्लाब र त्रिभुवनको नारा उठाएँ । यसमा मेरो साथमा ६ जवान साथीहरू थिए ता पनि केबल एक जनाले मात्र जिन्दावाद भनी साथ दिए । बस, आमा, अनि त के थियो र, मेरो यो आवाज सुन्ने बित्तिकै राणाको दलाल जेलको कप्तान भनाउँदोले मेरो मेरो गर्दनमा भएको गुण्टा तानी मलाई आफ्नो मुखमा भद्दा शब्दहरूले गन्धा पार्दै गाली दियो र भन्यो— ‘थाहा छ, यो कस्तो ठाम हो ? के सम्झेर तैले चिच्याइस् ?’ यसको जवाफमा मैले भनेँ, ‘थाहा पाएको भए यसरी आउने जरुरतै थिएन । अब थाहा पाउँदै आउन लागेको छु ।’ साथै जिन्दावाद भन्ने साथीलाई पनि नराम्रोसँग गाली ग¥यो । अब साथीहरू साथै म पनि भित्र हुलिएँ । भित्र फेरि हामीमाथि अर्को घेरा लाग्यो । घेराले घेरिएरै एउटा छिँडीमा ल्याई हामीलाई राखेको छ ।
तपाईले पठाइदिनुभएका दुई सुकुल, लालटेन, दाल, चामल, नून, तेल, घिउ, तरकारी र सुपारी, चुरोट (साँझ) ५ बजेतिर पाएँ ।
बत्ती मधुरो हुँदै गैराखेको छ । तपाईले पठाइदिनुभएको लालटेन बाल्न दिएन । खोसेर लगिहाल्यो । अतः आजलाई यहीँ रोक्दैछु । ज्यादा अर्कोमा । आमा, जुन चलाखी र युक्तिले तपाईले यो चिट्ठी पठाउनुभयो, त्यो म सोध्ने साहस नै गर्न सक्तिनँ । आज मलाई यो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल्यो कि पुत्र स्नेहले मातालाई के सिकाउँदो रहेनछ भन्ने कुरा । (क्रमशः)